नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको अर्को झापड, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकन नहुने फैसला
प्रचण्डलाई सर्वोच्च अदालतको अर्को झापड, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने आफ्नो फैसलामा पुनरावलोकन नहुने फैसला
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले आज पहिलाकै फैसला सही भएको ठहर गर्दै नेकपा विवादको मुद्दाका पुनरावलोकन अनुमति नदिने आदेश गरेको हो ।
उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले पहिलाको फैसला सही भएको ठहर गर्दै आज पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।
कविता : "कमरेड"
के छ कमरेड तिम्रो खबर ?
मैले यत्ति के भनेको थिएँ,
उ झनक्क रिसायो
बाक्लै भेटघाट हुन्थ्यो हाम्रो
तँ तँ र म म गर्ने मेरो जिग्री
कोरोनाले गर्दा भेट्न नपाएको जिग्री
फोनमै झोँक्कियो बा !
नराम्रो सँग पड्कियो
पटेका पड्के जसरी !
मलाई बोल्न दिए पो !
उ बोल्दै गयो
पड्किँदै गयो !
कहिल्यै अप्रिय भाषा नबोल्ने उ
आज त पड्किँदै भन्यो -
ए साला !
तँ मेरो शत्रु होस कि साथी ?
साथी होस भने बन्द गर यो कमरेड भन्न
के लुटेरा हुँ म ??
के काम काज केही नभएको,
ठ्याउके, बेरोजगार, जौवा हुँ म ??
किन मलाई कमरेड भनिस् ??
कुनै नेताको फेरो समाएर हिँडेको देखेको छस् ?
कुनै भ्रष्ट नेता, ज्यानमाराको,
आरती उतारेको देखेको छस् ?
किन भनिस् मलाई कमरेड ??
मैले कसको के लुटें ?
कसलाई अपहरण गरें ?
को सँग चन्दा मागें ?
कसलाई मारें ?
के कुरामा ढाँटें ?
कहिले के सपना बाँडें ?
कसको घरबार बिगारें ?
किन भनिस कमरेड ??
ख्याल गर अब देखी,
सबै मान्छे बराबर
देशको सिमा हुँदैन
संसार एउटै हुन्छ
संसार स्वर्ग हुन्छ
तिमी हामी सब बराबर
देख्यौ फलानाको घर ?
देख्यौ उसको सम्पत्ती ?
त्यो सब खोसेर बाडिन्छ
तिमीलाई पनि भाग लगाइन्छ !
यि र यस्ता बकवास कुरा मैले गरेको छु ??
कहिलै कहीं भनेको छु ??
अनि किन भनिस मलाई कमरेड ??
साथी होस भने नभन कमरेड !
म आफ्नो गरिखाने मान्छे हुँ
खुन र पसिना सिँचेर खान्छु
आफ्नै स्वाभिमानमा बाँच्छु
खबरदार, मलाई कमरेड नभन !
माफ देन यार गल्ती भएछ
लौ मैले माफी मागेँ भन्दै थेँ म
आज तँ सँग म कुरै गर्दिन भन्यो
अनि ढ्याक्क राख्यो फोन उसले ।
आज बिहान बिहानै नराम्रो झड्को आइलाग्यो
कमरेड भनेर जिस्क्याउँदा खड्को आइलाग्यो !
मन मनै कन्दै छु - कति बदनाम भएछ यो कमरेड !!
भो अब भन्दिन कसैलाई कमरेड
मैले गल्ती महसुस गरिसकेको छु ।